Home Wararka Baarliin Biin: Si doorashada la iiga reebo ayaa qabiilka aan ka dhashay...
Baarliin Biin: Si doorashada la iiga reebo ayaa qabiilka aan ka dhashay shaki la galiyay
Baarliin Maxamuud Biin oo ahayd musharraxad u taagan doorashada kursiga HOP-097, ayaa ku eedeysay guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle in ay udiideen in ay aqbalaan musharraxnimadeeda doorashada.
Baarliin oo kasoo laabatay magaalada jowhar oo ay halkaas muddo u joogtay udiyaar garowga doorashada, waxay sheegtay in loola dhaqmay si ka baxsan Soomaalinimada, iyadoo sheegtay in shaki la galiyay qabiilka ay ka dhalatay, loona sheegay in ay aanay kursigaas sinaba ugu tartami karin.
Baarliin ayaa warbaahinta ka sheegtay sababta tacaddigaas loogu geystay in ay tahay, si aanay kursiga ugula tartamin Khadiijo Maxamed Diiriye oo kursigaan ku fadhida muddo 21 sano ah.
“Anigoo Soomaali ah lehna xaquuqda ay Soomaali leedahay, waxaa la iila dhaqmay si qof aan waddanka lahayn, qabiilka ay u dhalatayna u baahan inay caddeyso. Iyadoo la ogyahay qabiilkayga iyo inaan la tartamayo islaanta kursiga ku fadhida ayay guddiga doorashada igu sameeyeen cabsi galin,” ayay tiri Baarliin oo weriyayaasha kula hadlaysay Muqdisho.
Waxay sheegtay in loo awood sheegtay oo kursiga loo xiray Khadiijo Maxamed Diiriye, oo ay tilmaamtay in ay garab ka haysato madaxda sare ee dalka iyo maamulka Hirshabeelle.
“Waxaa nasiib darro leh anigoo rajo leh, oo madaxweyne Cali Guudlaawe ballan iga qaaday inuu caddaalad isiin doono, oo uu igu dhahay “Baarliin soo tartan” waxaa ii roonayd inuu markii hore i dhaho kursigaan ka daneyso. Waayo qarashna ima galayn, waqtina igama lumayn,” ayay tiri.
Waxay ugu dambayn sheegtay in ay meel kasta dacwaddeeda gaarsiindoonto islamarkaana aysan ka haridoonin illaa ay xuquuqdeeda hesho.
Si kastaba ha ahaatee doorashada kursigan ayaa kamid ah kuraasta berrito lagu doorandoono magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle.
Previous articleKooxda Daacish iyo Amiir Fahad Yasiin ayaa ku heshiiyey in Suuqa Bakaaraha Khasab Lagu Furo.
Next articleLafta-gareen oo Xildhibaan saaxiib la ah Farmaajo ka hor istaagay Kursigiisii Golaha Shacabka
Ha’yadda lacagta adduunka oo shaacisay in uu hoos u dhac ku...